PressReader - Isolezwe: 2018-05-17 - Sekuphele izinyanga singaholi: abafaka ipayipi
Sekuphele izinyanga singaholi: abafaka ipayipi
IKATI lilele eziko kubasebenzi abaqashelwe uhlelo lokufaka ipayipi elikhulu lamanzi eNteke, eMariannhill, ngenxa yokuthi bathi sekuphele izinyanga bengaholi.
Abasebenzi, abaqashwe yizinkontileka ezehlukene, bathe nangonyaka odlule bebebhekene nenkinga efanayo ngangokuthi abanye babo baze bahlala emakhaya.
Omunye wabo, ocele ligodlwe igama lakhe, uthe umsebenzi wabo unezinkinga eziningi. Uthe ngoNovemba abaholanga kwaze kwaba wuJanuwari. Kwze kwagqekezwa namahhovisi agcine impahla yokusebenza ngenxa yokuthi abanye onogada base bengayi emsebenzini ngenxa yokungaholi.
“Kwaphoqeleka ukuthi abanye abasebenzi bame ukusebenza ngenxa yokungaholi. Siqashwe yizinkontileka ezehlukene, ezinye zazo ezinezinyanga ezimbili zingabaholeli abasebenzi. Kuyasilimaza nathi ukungaholi ngoba sinezidingo emakhaya,” kusho yena.
Kuthiwa umsebenzi wokufaka ipayipi uqale ngo-2016 kanti kulindeke ukuthi uphothulwe kulo nyaka.
Ikhansela uSibusiso Mpanza uthe kuyiphutha ukuthi sekuphele izinyanga ezingaphezu kweyodwa abasebenzi bengaholile. Uthe ungumxhumanisi wabasebenzi futhi uyabatshela uma kunezinkinga.
“Engikwaziyo wukuthi yinyanga edlule kuphela abangayiholelanga futhi abanye bayaqhubeka nokusebenza. Kube nenkinga yokuthi ezinye izinkontileka ziphuzile ukuthola imali yokuholela abasebenzi. Nangonyaka odlule kuke kwaba nenkinga bangahola inyanga eyodwa. Ngikhulumile nezinhlaka ezithintekayo kwathiwa abasebenzi bazoholelwa lingakapheli isonto,” kusho uMpanza.
Uthe zintathu izinkontileka ezingaholelile kweziyisikhombisa eziqashiwe. Abasebenzi abakhulume neSolezwe bathe ngeke babuyele emsebenzini bengakakhokhelwa ngoba abasazikholwa izethembiso.